Mpanamboatra sy mpamatsy kaontenera tariby | China Led Container Factory
20ft LED CONTAINER-TSY MISY CHASSIS
CT 20 metatra tariby tsy misy chassis （Model ： E-CON20） dia fivarotana fampirantiana finday (varavarankely) vaovao sy mety ho an'ny orinasa hampisehoana vokatra sy hampiroborobo ny marika.
Ny 40ft LED CONTAINER-FOTON AUMAN （Model ： E-C40） namboarin'i Jingchuan dia novaina ary novokarina tamina chassis semi-tranofiara. Ny fiara fitaterana an-tsehatra dia misy efijery LED feno loko malalaka miaraka amin'ny velaran'ny efijery 40 metatra toradroa. Mety amin'ny hetsika lehibe sy fahitalavitra lehibe izy io satria fampielezam-peo mivantana sy fampielezam-peo mivantana, afaka mahatsapa fandefasana mivantana mivantana sy famoahana vaovao.
15ft nitazona chassis tsy misy container
Ao amin'ny tsena ampitan-dranomasina, ny kaontenera tarihina dia eo amin'ny sehatry ny fampandrosoana sy fitomboana haingana. Amin'izao fotoana izao, ny vidin'ny fiara fitaterana entana entina vita any Sina dia manodidina ny 30% -50% amin'ny vokatra any ivelany mitovy amin'izany. Io dia ahafahantsika manana vidiny lehibe kokoa.
JCT 40ft LED Container-CIMC （Model ： E-CON40） dia fiara manokana izay mety amin'ny fampisehoana finday ary azo apetraka amin'ny sehatra iray. Ny 40ft LED Container dia misy efijery lehibe LED any ivelany, sehatra hydraulic automatique tanteraka, ary feo sy jiro matihanina.
Kamiaona finday taratra finday, Led Mobile Trailer, Mobile Led Billboard kamiao, Nentina amidy kamiao finday, Kamiaona dokam-barotra notarihin'ny finday, Led Mobile kamio,